Chishanu, December 22, 2006 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Ndiri feni ya John Chow Dot Com, Iyo Miscellaneous Ramblings yeDot Com Mogul. Pane iyo blogosphere, pane chikafu cheni kana muchida, chevabloggi. Ini ndaizogadza John Chow semumwe wevaya vari pamusoro peketani yechikafu. John akatanga iyo TechZone muna 1999 uye zvimwe zvese yaive nhoroondo. John ane masimba nekuda kwenyaya yake yeinternet, mafaro ake anonakidza, uye ruzivo rwake rwehunyanzvi. Yake blog ndeye yandinotarisa kumusoro nekuti John ari maviri ari pachena uye ega pane yake blog.
Johane ndiye kugoverana chiremera chake pawebhu kuburikidza nekutaura nezvevaya vanonyora posvo vachiongorora blog yavo. Ndicho chikonzero chiri shure kwangu ndichinyora nezvake pano.
Blog raJohn riri kuitawo zvakanaka munzira yekuita mari - chikonzero chakakosha nei ndichichengeta chikafu chake. Kana iwe uchinetseka kuti ungaita sei mari yako blog, yake inogona kunge iri yekutanga kutanga nayo. John akaedza zvakati wandei nezve dhizaini yeblog, iko kushambadza, masosi ekushambadzira, nezvimwewo uye nehunyoro anozivisa pane zvese izvi. Chikamu chakanaka chemari yake yekushambadzira inoendawo yakanangana nesangano… izvo zvakanaka. Zvenguva pfupi yapfuura, John ari kutoita kushambadzira kwakananga pane yake saiti pane wechitatu-bato. Ndinotarisira kuverenga zvakawanda nezvekuti zviri kufamba sei.
Kana iwe uchida kuwana kuravira kwakajeka kwaJohn, kwake kuseka, uye zvirimo pane yake saiti, ini ndaizotarisa zvinotevera:
John Chow ndiani (asiri akakomba)
Ndiani John Chow (zvakanyanyisa)
Zvimwe zvinyorwa zvenguva pfupi paTekinoroji
John anouya seasingatyi, asi asingazvitutumadze. Icho chiri pasi-pasi-pasi kutendeseka kunoongwa. Handisati ndaona kana posvo yaakatora mukana we 'bully pulpit' yake uye akaishandisa kurova chero munhu. Asi, iko kukwikwidza uye kazhinji kuseka. Ini ndinofunga John angave ari mukomana waungade kunwa doro naye. Ini ndakoka kuti ndimutengere imwe nguva inotevera ini ndiri muVancouver.
Ndakaenda kuChikoro chepamusoro muVancouver saka ndinonakidzwa nekuverenga zvinyorwa zvavo nezvekuva mukati nekutenderedza rimwe remaguta andinofarira pasi pano. Saka ipapo unayo - wongororo yangu ye John Chow Dot Com, Iyo Miscellaneous Ramblings eDot Com Mogul. Hat yabva kwauri John ... mumwe wevangu blogomentors!
John ariwo mumwe wevapfeki uye mutambi ... tinya pano kumuona achiita.